Ma jiraan cuntooyin sare u qaadi karo hammada? - BBC News Somali
Image caption Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay jiraan cuntooyin gaar ahaa oo ka caawinayaa howsha gogosha
Balse qaadashada cuntooyinka isku dheelitiran, sare u qaadidda dhaqamada nolosha iyo caafimaadka wanaagsan waxay dhammaantood ka qeyb qaadan karaan inay xoojiyaan awooddaada dhanka gudashada howsha gogosha, su'aasha waxay tahay ma jiraan cuntooyin dabiici ah oo sare u qaadi karo howsha sariirta lamaanayaasha?.
Waxaa jiro cuntooyin leh nafaqo u wanaagsan xoojinta shahwada, waxaan eegeynaa taarikhda iyo mabaadii'yada seyniska ee sharraxaya cuntooyinka xoojin karaa howsha sariirta lamaanayaasha.
Image caption Caroogta badda
Daraasdda ayaa muujinya in maadada Zinc lagu daweeyo dalmo la'anta iyo waxay sare u qaadda tayada biyaha ragga.
Image caption Cunidda shukulaatada
Waxaa la sheega in shukulaatada ay ku jirto in yar oo kamid ah maaddada phenylethylamine (PEA), inkasta oo aan la ogeyn in shahwada ay xoojin karto ama in kale balse mirta laga sameeyo shukulaatada ee geedka Cocoa ayaa sare u qaadaa shaqada dhiigga ee jirka banii'aadanka.
Cuntooyinka leh maaddada tryptophan ee ka qeyb qaadata jir dhiska waxaa kamid aha, Ukunta, Hilibka Shimbiraha, miraha,
Image caption Basbaaska
Basbaaska kulul ayaa sare u qaadaa shaqooyin jirka banii'aadanka sida heerkulka jirka, shaqada wadnaha, waxay arrimahaas ay dhacaan marka aad ku gudo jirtid howsha sariirta.
Image caption Cuntooyinka badda ayaa la rumeysan yahay inay sare u qaadaan shahwada